Bangaphezu kuka-2,000 3 abasebenzi bezokuvakasha baseJamaica abagonywe ezinsukwini ezintathu zokuqala zohlelo lokugoma
Ikhaya » Izindaba Zamuva » I-Caribbean » Bangaphezu kuka-2,000 3 abasebenzi bezokuvakasha baseJamaica abagonywe ezinsukwini ezintathu zokuqala zohlelo lokugoma
Izindaba Ezintsha • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
HM NGIYABONGA - uNgqongqoshe Wezokuvakasha, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, (omile) uzwakalisa ukubonga okukhulu kubasebenzi abaningi bezokuvakasha ngesikhathi sabo sokubuka ngemuva kokuthatha umuthi wokugoma abazikhethele wona esizeni se-Moon Palace ngoLwesihlanu, ngoSepthemba 3, 2021. Ubabonge ngokudlala kwabo indima ekuvikeleni ezokuvakasha umkhakha, ngokuthatha umuthi wokugoma osindisa impilo.
Bangaphezu kuka-2,000 30 abasebenzi bezokuvakasha eJamaica abagonywe besebenzisa umuthi wokugoma owodwa kwemithathu abanikezwe yona ezindaweni eziningi zamasu ezihlelwe yi-Tourism Vaccination Task Force entsha, ezinsukwini zayo zokuqala ezintathu zemisebenzi emikhulu. ITask Force, esungulelwe ukusiza ukugonywa kwabo bonke abasebenzi bezokuvakasha esiqhingini sonke, ihlele uchungechunge lwama-blitzes okugoma, kanti eyokuqala ibanjwe ngo-Agasti XNUMX.
Ukuvakasha kweJamaica ngomugqa omuhle wokugonywa kwe-COVID-19 kubasebenzi bezokuvakasha.
UNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye noSihlalo Omunye Womsebenzi Wokugonywa Kwezokuvakasha bebekhona endaweni yokugomela iMoon Palace ukuzobonga amaqembu nabasebenzi.
Izindawo eziningi zokugoma izobekwa eNegril, e-Ocho Rios, eMontego Bay naseSouth Coast ngethemba lokugoma abantu abangafika kuma-600 ngosuku endaweni ngayinye.
Ngemuva kokugonywa kwabasebenzi abayi-1,200 30 ePegasus Hotel ngo-Agasti 2, ngaphezu kwezinsuku ezimbili (Septhemba 3-556) uSandals Negril wabona abasebenzi bezokuvakasha abangaba ngu-3 bethatha imishanguzo abayithandayo, ngenkathi beseseMoon Palace e-Ocho Rios ngoLwesihlanu, ngoSepthemba 385. , bangu-320 abasebenzi abagonyiwe. Kodwa-ke, iMoon Palace yayine-blitz yangaphambilini lapho abasebenzi abangama-60 bathola khona i-jab kanti kuze kube manje amaphesenti angama-XNUMX abasebenzi bayo sebegonyiwe.
Jamaica Ungqongqoshe Wezokuvakasha, uMhlonishwa. Edmund Bartlett, kanye naSihlalo Wekuhlanganyela Umsebenzi Wokugonywa Kwezokuvakasha, UClifton Reader, bebekhona endaweni yokugomela iMoon Palace ukubheka ukusebenza lapho nokubonga amathimba asebenzisanayo kubandakanya abahlengikazi nodokotela abavela emkhakheni ozimele ababambe iqhaza kulolu hlelo.
UNgqongqoshe uBartlett uthe, “lolu hlelo lubambisene phakathi koMnyango Wezokuvakasha, iJamaica Hotel and Tourist Association (JHTA), kanye nePrivate Sector Vaccine Initiative (PSVI) ukuqhuba ukugoma kwabasebenzi abangu-170,000 bemboni kuyo yonke imikhakha engaphansi. imikhakha. ”
Ngenkathi evuma ukuthi lolu uhlelo olude, uMnu. Bartlett wayenethemba njengoba "sibona ukuzimisela kwabasebenzi manje njengoba kufakazelwa yimigwaqo esiyibonile ezinsukwini ezintathu ezedlule selokhu uhlelo luqalile."
Uthe kuzokwakhiwa ezinye izindawo ezingama-blitz eNegril, Ocho Rios, Montego Bay naseSouth Coast ngethemba lokugoma abantu abangafika ku-600 ngosuku endaweni ngayinye. "Inhloso akukhona ukufaka ingqalasizinda yezempilo ekhona ukwenza lolu hlelo lokugoma, ngakho-ke odokotela, abahlengikazi nazo zonke izinhlelo zengqalasizinda zinikezwa yithi ngokubambisana," esho.
UNgqongqoshe wenze ukunxenxa kwakhe kubasebenzi abasembonini yezokuvakasha, imindeni yabo kanye nabangane abaseduze ukuthi bathole lezi zindawo ze-blitz ezihlelwe ngokukhethekile ezinikezela ngemithi yokugoma i-AstraZeneca, Pfizer kanye neJohnson & Johnson mahhala. “Asiphendukeli muntu,” wagcizelela.
Khonamanjalo, uMnu Reader ophinde abe nguMongameli we-JHTA futhi ongumqondisi ophethe i-Moon Palace, uthe i-blitz yangaphambilini yabasebenzi behhotela “ihambe kahle kakhulu ukuthi kulokhu sinqume ukuyivulela hhayi imindeni yabasebenzi bethu kuphela kodwa abathengisi bezandla, abasebenza ngezokuthutha, abasebenzi basezindaweni zasemakhaya nalabo abakhangayo. ” Abantu abathola umthamo wabo wokuqala eMoon Palace bazophinda bamenywe ngomthamo wabo wesibili.
Iphansi lonke lephiko lasentshonalanga yehhotela lavulelwa isiza se-blitz futhi ababambiqhaza badabula eshaweni lokuzihlanza ngaphambi kokungena endaweni lapho baphinde banikezwa khona isethulo esibukwayo somsindo ngegciwane kanye nemithi yokugoma ye-COVID-19.
UMnu Reader uthe amahhotela amakhulu anamandla okwenza lokho, akhuthazekile ukuthi akhokhe imali yokuphatha ukuze aqinisekise ukuthi noma ngubani oqhamukile ngeke akhokhe lutho ukuze agonywe. "Sifuna indawo ephephile yokusebenza kubantu bethu futhi ukuphela kwendlela yokwenza lokho ngukugoma," kusho uMnu Reader.
Lowo osebenza eSpa e-Moon Palace, uChevanise Williams uthe uyaqonda ukuthi ukuthatha umuthi wokugoma akulona ikhambi le-COVID-19 kodwa “uma ulithola leli gciwane, uyazi ukuthi izimpawu zizoba zincane kakhulu, ngakho-ke kubalulekile… ngoba kufanele ngivikele umndeni wami kanye nabantu abeza lapha. ”